အီစတာပွဲတော်နေ့ - Howling Pixel
သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အထိမ်းအမှတ် ပြုသော အားဖြင့် ခရစ်ယာန် အယူဝါဒ ထွန်းကားသော တိုင်းပြည်များ တွင် အီစတာပွဲတော်နေ့ကို ကျင်းပကြသည်။ အီစတာပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တခမ်းတနား ကျင်းပကြသည်။ အီစတာပွဲတော် ကို အမြဲတမ်း တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပ ကြသည်။ သို့ရာတွင် မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ကျသော တနင်္ဂနွေနေ့ဟူ၍ကား အတည် တကျ သတ်မှတ်ထား ခြင်း မရှိချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ လွန်လေပြီးသော ပထမဆုံး လပြည့်နေ့၏ နောက် ပထမဆုံး တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပရသော ထုံးစံအစဉ် အလာ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အီစတာပွဲတော် အစောဆုံး ကျရောက်နိုင်သောနေ့မှာ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ဖြစ်၍ နောက်အကျဆုံးနေ့မှာ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ဖြစ်လေသည်။ အီစတာပွဲတော်နေ့မှာ ရက်စွဲအတည်တကျ မဖြစ်ရကား အီစတာပွဲတော် မတိုင်မီနှစ် ပွဲတော်အပြီးတွင် ကျင်းပရသော အခြား အယူဝါဒဆိုင်ရာ ပွဲတော်များမှာလည်း ရက်စွဲအတည် တကျ မဖြစ်ချေ။ အီစတာပွဲတော်သည် ခရစ်ယာန်ပွဲတော်များ တွင် ရှေးအကျဆုံး ပွဲတော်ဖြစ်၍ အကြောင်းသုံးမျိုး အရင်းခံ ၏သည်။ ယင်းတို့မှာ (၁) ခရစ်တော် ရှင်ပြန် ထမြောက်သော နေ့၊ (၂) ခရစ်ယာန် ဝါကျွတ်သောနေ့၊ (၃) နွေကူးရာသီကို ကြိုဆို သောနေ့များ ဖြစ်လေသည်။ အီစတာပွဲတော်ကို နွေကူး ရာသီတွင် ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ အီစတာပွဲတော်နေ့ ဟူ၍ မပေါ်ပေါက်မီ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက လူများသည် နွေကူးရာသီရောက်ရှိလာသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်သော အားဖြင့် နွေဦးပေါက်တွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ကြဘူး လေသည်။ ရာသီမှာလည်း အလွန် သာယာလှသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ နွေကူးရာသီကို လူ့လောကသို့ ပြန်လည်ပို့ ဆောင် ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်အား ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ ထိုခေတ်က လူများသည် နွေကူးရာသီ ကုန်ဆုံးသွား သောအခါ လွန်စွာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ဖြစ်ကြပြီးလျှင် ကြည်နူးသာယာ လှသော နွေကူးရာသီကလေးသည် ကား ပြန်၍လာတော့မည် မဟုတ်ပြီ။ စိမ်းလန်းစိုပြည်သော မြက်ခင်းကလေးများကိုလည်း မမြင်ကြရတော့ပြီဟု များစွာ ယူကြုံးမရဖြစ်၍ နွေကူးရာသီကို တောင့်တကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း ဆောင်းရာသီ ဘီလူးကြီးသည် လှပသောနွေဦးမယ်ကို အတင်းအဓမ္မလုယူသွား လေပြီဟု ပူဆွေးခြင်းဖြစ်ကြလေသည်။ သို့ဖြစ်၍ နွေဦးမယ်ကို ပြန်ပေးပါမည့်အကြောင်း ဆောင်းဘီလူးကြီးအား တန်ဆိုး လက်ဆောင် အမျိုးမျိုး ပေးကြ၏။ နွေဦးမယ်ကို ပြန်လည်ရရှိ ကြသောအခါတွင်လည်း ဘီလူးကြီးအား ကျေးဇူးတင်သောအား ဖြင့် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများ ပေးကြလေသည်။ ထိုအလေ့အထ ကို တုယူ၍ သေခြင်းမှ ပြန်၍အသက်ရှင်သည့် နေ့ကိုအထိမ်း အမှတ်ပြုသော အီစတာပွဲတော်နေ့တွင်လည်း တစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်သို့ လက်ဆောင်များ ပေးကမ်းသော အလေ့ကို ပြုလုပ်ကြသည်ဟု ယူဆရပေသည်။ ရှေးအခါက လူများ ကျင်းပခဲ့ကြသော နွေဦးပွဲတော်မှာ တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာလေသည်။ ယခုခေတ်တွင် ပြုလုပ်ကြသော အီစတာပွဲတော်မှာကား ပထမတွင် တစ်ခါကျင်းပလျှင် ခုနစ်ရက်မျှ ကြာလေ သည်။ အီစတာပွဲ တော်အချိန်တွင် ခရစ်ယာန် အယူဝါဒီတိုင်း ပျော်ရွှင်မြူးတူးကြ လေသည်။ ရှေးအခါကပင် ပွဲတော်ရက်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားခဲ့ကြ လေသည်။ အီစတာနေ့သည် ခရစ်ယာန်အယူ ဝါဒီများအဖို့ အလွန်တရာ ထူးမြတ်သောနေ့ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ထိုနေ့တွင် ငွေဝယ်ကျွန်များကို ဘေးမဲ့လွတ်ခြင်း၊ မိမိတို့၏ ဟောင်းနွမ်းသော အဝတ်အစားများကို စွန့်ပစ်၍ သစ်လွင်သော အဝတ်တန်ဆာများကို ဆင်မြန်းခြင်း၊ အိမ်အသုံးအဆောင်ဟူသမျှကို အသစ်လဲလှယ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလေ့ရှိကြသည်။ အီစတာပွဲတော်တွင် ကြက်ဥများကို လက်ဆောင်ပေးသော အလေ့မှာလည်း ရှေးအခါကပင် ရှိခဲ့သည်။ ရှေးအခါက ကက်မ များသည် ဥအနည်းငယ်မျှသာ အုကြလေရာ ကြက်ဥသည် အသက်၏မူလအစဖြစ်သဖြင့် ထိုသဘောကိုဆောင်၍ ဠကက်ဥ များကို လက်ဆောင်ရသောသူများမှာ လွန်စွာဝမ်းမြောက်ကြပေ သည်။ ယခုခေတ်တွင်ကား ကြက်ဥများကို အဖိုးတန် လက်ဆောင်ဖြစ်စေရန် တောက်ပသောအရောင်များကို ဆိုး၍ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဒေတာကိုမျိုးဆက် က Man အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အမျိုးသမီး မှ စိန့်ဂျော့ နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ generarto နဂါး၏ပုံစံများမှကြက်ဥပေးထားမြင့်တက်အတွက်ကမ်ဘာဦးကမျြးစာကိုဦးသေဆုံး အသိဉာဏ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝသဘာဝဖန်ဆင်းခြင်း၏ဆုကြေးဇူးကို၏အမှားနှင့်အပြစ်များကိုသတိပြုမိကြသည်သက်ရောက်စေလိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခြေလျင်နှင့် San Giorgio လူ့သန္ဓေသားကလေးငယ်ကိုမွေးဖွားမိသားစုနှင့်သစ်ကိုမွေးဖွားအတွက်မျိုးဆက်မှပုံမှန်အား genetati မျိုးဆက်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိလိုအပ်ပါတယ်ခံရ ကောင်းမကောင်းကို ဒေတာများ နှင့်ပညတ်အတွက် ဘုရားသခငျသညျ transumanato astral နတ်ဘုရားအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ Giorgio ပေးထားသောအမိန့်ဒေတာကမ္ဘာဦးကလူသားဇာစ်မြစ် လက်ဆောင်ပေးကြသည်။ 
ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန် ကို အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်၊ ခရစ်ယာန်ပြက္ခဒိန် ဟုခေါ်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် အများဆုံး အသုံးပြုနေသော ပြက္ခဒိန် ဖြစ်သည်။ ၁၅၈၂ ခုနှစ်တွင် စတင် အသုံးပြု၊ ပြင်ဆင်စေခဲ့သူ ပုပ် ဂရီဂေါရီ (၁၃)ကို အစွဲပြု၍ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၅၈၂ ခုနှစ်တွင် ဂျူလီယန် ပြက္ခဒိန် ကို ပြန်လည်စိစစ် ရေတွက်ပြီး တစ်နှစ်တာ အချိန်၏ ၀.၀၀၂% အမှန်သို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၏ အခြေခံ အကြောင်းမှာ အီစတာပွဲတော်ကို ကျင်းပမည့်ရက်ကို အစောပိုင်း ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်မှ ကြေငြာသည့်ရက်ကို ပြောင်းရွေ့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အီစတာပွဲတော်ကျင်းပမည့်ရက်သည် နွေဦး၏ နေ့ညညီချိန်နှင့် ဆက်နွယ်၍ နေသောကြောင့် ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတော်မှ အီစတာပွဲတော် ကျင်းပချိန် အစဉ်အလာကို တည်မြဲစေရန် မနှစ်သက်ဖွယ်ရာ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာသော အချိန်ကို ပြင်ဆင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းကို အစောပိုင်းတွင် ဥရောပရှိ ကက်သလစ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော နိုင်ငံများတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ပရိုတက်စတင့် နှင့် အရှေ့ပိုင်း အောသိုဒေါ့ ခရစ်ယာန် နိုင်ငံများတွင် ရိုးရာ ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်ကိုသာ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာသော အခါမှသာ ဂရီဂေါရီယန်းပြက္ခဒိန်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးပြောင်းလဲခဲ့သော ဥရောပနိုင်ငံမှာ ဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင်မှ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဂရီဂေါရီယန်းပြက္ခဒိန် ပြောင်းလဲခြင်းတွင် အပိုင်း (၂) ပိုင်းပါဝင်းပြီး ၎င်းတို့မှာ အစောပိုင်းအချိန်ထိ အသုံးပြုခဲ့သော ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်ကို ပုပ် ဂရီဂေါရီ (၁၃) အချိန်ထိ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အီစတာပွဲတော်ရက် သတ်မှတ်ခြင်းကို ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်နှင့်အတူ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်မှ အသုံးပြုသော လလည်ပတ်ချိန်စက်ဝန်းကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် Aloysius Lilius ၏ အဆိုပြုချက်အရ ပြင်ဆင်၍ ထားသည်။ သူ၏ အဆိုပြုချက်တွင် ၄ ရာစုအတွင်း မှ ၃ နှစ်ကို ဖယ်ထုတ်၍ ၄ ရာစုအတွင်း ပါဝင်သော ရက်ထပ်နှစ် ၁၀၀ မှ ၉၇ ထိ ရက်ထပ်နှစ်များကို လျော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ လီလီရက်စ်၏ မူလနှင့်လက်တွေ့ စီမံချက်တွင် နှစ်စဉ် အီစတာပွဲတော်နေ့ကို တွက်ချက်ရန် epacts of the moon ကို ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် ကာလကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေသာ အမှားကို ပြင်ဆင်၍ ပြက္ခဒိန်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရီဂေါရီယန်ပြက္ခဒိန်သည် ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်၏ ရက်ထပ်နှစ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားသည်-
လေး(၄)နှင့်စား၍ပြတ်သောနှစ်တိုင်းကို ရက်ထပ်နှစ်ဟု ခေါ်စေခဲ့သည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် ၁၀၀ နှင့်စား၍ ပြတ်သော နှစ်များမှာ ရက်ထပ်နှစ်မဟုတ်ပေ။ ထိုနှစ်များထဲမှ ၄၀၀ နှင့် စား၍ ပြတ်ခဲ့လျှင်တော့ ထိုနှစ်သည် ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၇၀၀,၁၈၀၀,၁၉၀၀ ခုနှစ်တို့မှာ ရက်ထပ်နှစ် မဟုတ်ပဲ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်သည် ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲခြင်းကို ထပ်မံပြောရမည်ဆိုလျှင်၃၆၅.၂၅ ရက်(၃၆၅ ရက် ၆ နာရီ)ပါသော ပြက္ခဒိန်မှ ၃၆၅.၂၄၂၅ ရက်(၃၆၅ ရက် ၅ နာရီ ၄၉ မိနစ် ၁၂ စက္ကန့်)သို့ တစ်နှစ်၏ အချိန် ၁၀ မိနစ် ၄၈ စက္ကန့် လျော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန် ပြောင်းလဲခြင်းသည် ထိုအချိန်အလျားနှစ်ခု ခြားနားမှုကြောင့် ပိုနေသော အချိန်များကို ဖြေးရှင်းပေးလိုက်ခြင်းပင်။ နေ့နှင့်ည အချိန်အတိုင်းအတာ တူညီသော နွေဦး၏ ၂၀ မတ် သို့ ၂၁ မတ်(ရက်ထပ်နှစ်ပေါ် မူတည်၍)ကို သမ္မာကျမ်းစာလာ အီစတာအချိန်အဖြစ် သုံးရာစုမြောက်အဆုံးမှာ ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ထိုဥပဒေသများအရ အီစတာပွဲမတိုင်ခင် လပြည့်သည် ရှေးယခင်က တွက်ချက်ထားသော ၂၁ မတ်ကို မကျော်ရပေ။ ထို့ကြောင့် အီစတာပွဲ၏ အစောဆုံးနေ့ရက်သည် မတ်လ ၂၂ နှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေများအတွက် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ကို ၁၀ ရက်နှုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ရက်စွဲများတွင် သတ်မှတ်ရာတွင် မရောထွေးစေရန် ဒွေးနာမရက်စွဲ (သို့)Old Style (O.S.) and New Style (N.S.) ရက်စွဲများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ဒွေးနာမရက်ကို ဆက်တိုက်နှစ် ၂ နှစ်၏ နှစ်တစ်နှစ်၏ အစရက်များ မတူညီ၍ ဖြစ်စေ (သို့) ဂျူလီယန်နှင့် ဂရီဂေါရီးယန်း နေ့စွဲများ ပါဝင်နေ၍ ဖြစ်စေ အသုံးပြုကြသည်။ Old Style နှင့် New Style (N.S.) သည် ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်၏ နှစ်သစ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ဖြင့် စ၍ထားခြင်း(N.S.) နှင့် မတူညီသော ရက်တို့ဖြင့် စ၍ထားခြင်း(O.S.) အတွက် ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရက်စွဲများ ကိုက်ညီစေရန်အတွက် ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်(O.S.) နှင့် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်(N.S.) အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်စေ နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ကို ခရစ်တော်ဖွားမြင်သောနေ့ (အေဒီ)မှစတင် တွက်ချက်သော ရက်အတိုင်း ယခင် calendar era (နှစ်ရေတွက်ပုံစနစ်) တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ထိုရေတွက်ပုံကို ၆ရာစုတွင် Dionysius Exiguus ဆိုသူက တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ထိုနှစ်ရေတွက်ပုံနည်းစနစ်ကို Dionysian era or Common Era ဟု သိကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုစနစ်သည် ကမ္ဘာနိုင်ငံတဝန်း အသုံးပြုမှုရှိသည် အထိ အဓိကကျလာပြီ ဖြစ်သည်။
ပြဇာတ်။ ။ ပြဇာတ်ဟူသည် ဆိုလိုသည့်အဖြစ်အပျက်
တစ်စုံတရာကို ပွဲကြည့်သူတို့တွင် စိတ်တွင် ထင်ရှား
ပေါ်လွင်လာစေရန် လူကိုယ်တိုင်ထွက်၍ သရုပ်ဖော်ပြသရသည့်
ပြဇာတ်ဆိုသည့် စကားလုံးမှာ မြန်မာစကား 'ပြ' နှင့် ပါဠိပျက် 'ဇာတ်' စကား ၂ လုံးကို ပေါင်း ထားသော
စကားရပ်ဖြစ်သည်။ ' ပြ ' ဆိုသည်မှာ မျက်စိနှင့် မြင်ရအောင်
ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၍ ' ဇာတ် ' ဆိုသောစကားမှာ
ဖြစ်ခဲ့ပြီးအရာနှင့် စပ်ဆိုင်သောဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ' ဇာတက'
မှလာသည်။ ထိုကြောင့် ပြဇာတ်ဟူသည် အဖြစ်ကို ပြချက်ဟု
အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မျက်စိဖြင့်ကြည့်ပြီး နားလည်ရသော အဖြစ်အပျက် (သို့မဟုတ်) ဇာတ်ကို ပြဇာတ်ဟုသမုတ်ကြသည်။
ပြဇာတ်များသည် ရှေးပဝေသဏီခေတ်မှ ယခုတိုင်
ဘာသာနိုင်ငံမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး အသီးသီး မိမိတို့
၏ထုံးစံဓလေ့အလျောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း
၆ဝဝ ခန့်က အီဂျစ်နိုင်ငံ နိုင်းမြစ်တစ်လျှောက်တွင် နတ်များကို
ပူဇော်ပသရာ၌ ကခုန်ကြရာမှစ၍ ပြဇာတ်အခြေခံများ
ပေါ်လာသည်။ အဗိုင်ဒေါ့၊ သို့မဟုတ် အိုဆိုင်းရစ်ခေါ်
ပြဇာတ်သည် အိုဆိုင်းရစ်နတ်အကြောင်း သရုပ်ဖော်ပြသော
အီဂျစ်ပြဇာတ် ဖြစ် သည်။ နတ်ကိုးကွယ်သည့်အလေ့သည်
အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ဂရိနိုင်ငံသို့ ကူးစက်ခဲ့သည့် နည်းတူ၊
ယင်းကိုမှီ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကပွဲများသည်လည်း
ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဂရိနိုင်ငံတွင် ဒိုင်အိုနိုင်းဆပ်ခေါ် ဗက်ကပ်နတ် အား ပူဇော်ပွဲများတွင် ကခုန်ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။
ဂရိနတ်ပွဲများသည် ဆိုင်ရာနတ်ကွန်း၊ သို့မဟုတ်
အိမ်နေရာတည်း၌သာ ကျင်းပလေ့မရှိဘဲ မြို့ရွာ လမ်းပေါ်ရှိ
မြို့ရွာလမ်းပေါ်ရှိ လမ်းကြီး လမ်းငယ် အသွယ်သွယ်တို့တွင်
လှည့်လည်ကခုန်ကြ ခြင်းသာဖြစ်သည်။ မကြာမီ
ယင်းကခုန်ပွဲများအတွက် နတ်ချင်းများ တင်ကြိုရေးသားကြ
သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ယင်းကခုန်ပွဲများသည် ယခင်ကထက်
ပို၍ဇာတ်ဟန် ပါလာသည်။ ပါဝင်ကပြသူများသည်
သဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် ဝတ်စားဆင်ယင်ကြသည်။
နတ်အခန်းမှ ပါရသူသည် နတ်ဝတ်တန်ဆာဝတ်၍၊
တိရစ္ဆာန်အခန်းမှ ပါရသူသည် တိရစ္ဆာန်အဆောင်းကို ဆောင်း
ကြရသည်။ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာအခန်းများတွင် သီဆိုရန် အထူး
သီကုံးထားသော သီချင်းများကို ထိုသူတို့က သီဆိုကြရသည်။
ပထမသော် ကပြသူနှစ်ဦးခန့်သာ ရှိ၍ နောက် မကြာမီ
တစ်ယောက်တိုးလာပြီးလျှင် အချီအချ စကားပြောဟန်များကို
ဂရိပြဇာတ်လောကတွင် ရှေးဦး ပေါ်ပေါက်သူမှာ
အက်စကိလပ် ဖြစ်သည်။ အက်စကိလပ် ခေတ် မတိုင်မီက
ပွဲတော်များ၌ ဆိတ်ရေများ ဝတ်ဆင်ထားသူ တစုသည်
ယိမ်းသားများပမာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သံ ပြိုင်သီဆိုပြီးနောက်
က၍ ယိမ်းခေါင်းဆောင်က နတ်မင်း၏ အကြောင်း
လင်္ကာတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။ သို့ရာတွင်
အက်စကိလပ်ကမူ ယိမ်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးတည်း
လင်္ကာရွတ်ရသည့်နေရာတွင် ဇာတ်ကောင် ၂ ဦး အပြန်အလှန်
ထိုပြင်ပြကွက်တခန်းတည်း မဟုတ်တော့ဘဲအခန်း ခွဲပြစေသည်။
ယင်းသို့ဖြင့် ယခုပြဇာတ်သဘောမျိုး စတင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်
ဇာတ်ကောင်များသည် ဟန်အမူ အရာ သရုပ်မပါလှသဖြင့်
အက်စကိလပ်သည် ပြဇာတ် ၉ဝ ခန့် ရေးခဲ့သည့်အနက်
'ပရိုမီးသယူးဗောင်း' ပြဇာတ်အပါအဝင် ပြဇာတ် ခုနှစ်ခုသာ
ယနေ့တိုင် မပျောက်မပျက် ကျန်ခဲ့သည်။
အက်စကိလပ်နောက် ထင်ရှားသော ဂရိပြဇာတ်ဆရာကြီးမှာ
ဆောဖကလီ ဖြစ်သည်။ သူသည် ပန်းချီဆရာလည်း
ဖြစ်သည့်အလျောက် သူ့ပြဇာတ်များတွင် အခမ်းအနားတွင်
ရှုခင်းများကို ထည့်သွင်းသရုပ် ဖော်ခြင်း ပြုလာသည်။
အိမ်အခမ်းအနား ပြချင်သည့်အခါ အိမ်တံခါးပေါက်ပုံ
ရေးခြယ်၍ ပြရလေသည်။ ဆောဖကလီ၏ ပြဇာတ်များမှ
ဇာတ်ကောင်များသည် ရှေးဇာတ်ကောင်များထက် ဟန်အမူအရာ
ပါလာသော် လည်း သဘာဝကျရမည်ထက် ပိုလွန်းနေ၏။
သူသည်လည်း ပြဇာတ်ပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်ရေးခဲ့သည့်အနက်
အီးဒီးပတ်ဘုရင် ပြဇာတ်အပါအဝင် ပြဇာတ်ခုနှစ်ခုသာ
ကျန်ခဲ့သည်။ ဆောဖကလီနှင့် ခေတ်ပြိုင်လည်းဖြစ်
ပညာပြိုင်ဖက်လည်းဖြစ်သော ယူရစ်ပီးဒီ၏ ပြဇာတ်များကား
ဖတ်ရန်ရော ကပြရန်ပါ အထူးကောင်းမွန်သဖြင့် လူကြိုက်
အလွန်များသည်။ ယူရစ်ပီးဒီးသည် သူ၏ပြဇာတ်များ၌
လွမ်းခမ်းဖော်၍ အတော်အသင့် လွမ်းစေပြီး နောက်
စိတ်ပေါ့ပါးသွားစေရန် တေးကဗျာသီဆိုသည့် အခန်းမျိုးကို
ထည့်ပေးလေသည်။ သူသည် ပြဇာတ် ၉ဝ ရေးခဲ့သည့်အနက်
ပြဇာတ် ၁၈ ခုမျှ ယနေ့တိုင် မပျောက်မပျက် ကျန်လျက်ရှိသည်။
ဂရိအသော ပြဇာတ်များသည် အလွမ်းပြဇာတ်များနောက်မှ
ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည်လည်း စက်တင်ဘာလ
ကောက်သိမ်းပွဲတွင် ဆိုင်ရာနတ်မင်းအား ပူဇော်ပွဲမှ
စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထင်ရှားသော အသောပြဇာတ်ရေး ပုဂ္ဂိုလ်
ကြီးများမှာ အယ်ရစ္စတော့ဖနီးနှင့် မီနန်ဒါတို့ဖြစ်သည်။
အယ်ရစ္စတော့ဖနီး၏ ပြဇာတ်များသည် ထိုခေတ်က
သရော်ထားချက်များသည်။ မီနန်ဒါ ၏ပြဇာတ်များသည်
လူတို့၏ မိုက်မဲမှုကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ မိန်မများ
နိုင်ငံရေး၌ ဝင်စွက်သည်ကို မကြိုက်သော ထိုခေတ်က
အမျိုးသမီးများ အသောဇာတ်ကို ကြည့်ခွင့်မရှိချေ။
ဂရိပြဇာတ်များ၏ ဇာတ်လမ်းသည် လူအများသိပြီးသော
ဂရိထုံးဟောင်းပုံပြင်မှ ဝတ္ထုသွားကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ကာ
ကပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဂရိတို့သည် ကြမ်းခန်းနှင့် သေကြေ
ပျက်စီးခန်းမျိုးကို ပြသခြင်းမပြုဘဲ၊ ယင်းသည့် အခန်းမျိုးကို
ကြေငြာခြင်းဖြင့်သာ ပရိသတ်ကို သိရှိစေသည်။
ဇာတ်ကပြရာတွင် မိန်းမမင်းသမီး များမပါဝင်ဘဲ
အသောပြဇာတ်များတွင် ပါဝင်ပြသူများသည် ရယ်စ
ရာကောင်းသော ကိုယ်ကျပ်လက်ပြတ် အင်္ကျီများကို
ဝတ်ဆင်ပြီးလျှင် အချိုးမကျသော မျက်နှာဖုံးများ စွပ်ထားကြ
၏။ အလွမ်းပြဇာတ် ကပြသူများကမူ ရှည်လျားသော
အပေါ်အင်္ကျီဝတ်၍ ဝမ်းနည်းခြင်းကို ဖော်ပြသော
မျက်နှာဖုံးများနှင့် အရပ်ထွက်လာစေသော ခုံမြင့်ဖိနပ်များကို
ဂရိနိုင်ငံကို ရောမလူမျိုးတို့ သိမ်းပိုက်လိုက်သည့်အခါ
ရောမတို့သည် ဂရိတို့ထံမှ အနုပညာ အတတ်မျိုးစုံကို
အမွေခံရရှိလိုက်သည်။ ယင်းတို့အနက် ပြဇာတ်ပညာလည်း
တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရောမလူမျိုးတို့
လက်ထဲ၌ ပြဇာတ်ပညာသည် တိုးတက်လာခြင်းမရှိချေ။
ယင်းခေတ်က ထင်ရှားခဲ့ သော လက်တင်ပြဇာတ်ဆရာကြီး
သုံးဦးမှာ ပလော့တပ်၊ တားရင်းနှင့် ဆီနီကာတို့ ဖြစ်သည်။
ပလော့တပ်နှင့် တားရင်းတို့၏ အသောပြဇာတ်များကို
ရံဖန်ရံခါပင် စင်တင်ကပြသော်လည်း၊ ဆီနီကာ၏
အလွမ်းပြဇာတ်ကို မူတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ကပြခြင်းရှိခဲ့ဟန်
မတူချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂရိတို့သည်
အလွမ်းဇာတ်ရော အသော ဇာတ်ပါအားပေးကြသော်လည်း
ရောမလူမျိုးတို့သည် စစ်၌ဝါသနာထုံသူများ ဖြစ်သည့်အလျောက်
အလွမ်း ဇာတ်ကို မနှစ်သက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရောမတို့သည် ဇာတ်ညွှန်းကောင်းမွန်ရေးထက် ဇာတ်ခုံအခင်း
အကျင်းကောင်းမွန်ရေးကို ပိုမိုဂရုစိုက်ကြရာ၊ ရောမပြဇာတ်
အဆင့်အတန်းသည် တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ကျသွားလေသည်။
ယခင်က ပူဇော်ပသမှုကို အခြေခံထား၍ ကပြခဲ့သော
ပြဇာတ်များသည် မူးယစ်ပျော်ပါး စားသောက်ပွဲ တို့၌ အဝတ်
ချည်းစည်းနှင့် ကချေသည်မများ ကပြအသုံးတော်ခံကြသည့်
အဆင့်သို့လျှောကျသွားလေသည်။ အေဒီ ၆ ရာစုနှစ်တွင်
ရောမအင်ပိုင်ယာကို မြောက်ဘက်မှ ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်သော
လူရိုင်းတို့သည် ပြဇာတ်များကို လုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ရာ၊
ယင်းခေတ်မှ နှစ်ပေါင်း ၅ဝဝ အတွင်း
သို့ရာတွင် ပြဇာတ်ညာဉ်ကား ရှင်းရှင်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်း
ခရစ်နှစ် ၁ဝဝဝ ခန့်တွင် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ စပိန်၊
အီတလီ၊ ဂျာမနီစသော ဥရောပနိုင်ငံများ၌ သမ္မာကျမ်းဝင်ပုံပြင်
ပြဇာတ်များကို ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဝင်းများ အတွင်း၌ ဘုန်းကြီး
များကိုယ်တိုင် စီမံ ခင်းကျင်းပြသရာမှစ၍ ပြဇာတ်ခေတ်
ထလာပြန်သည်။ ယင်းမှ တစ်စတစ်စ ရာသီဥတုသာယာသော
အခါ သမယဖြစ်သည့် မေဒေးနေ့နှင့်
အီစတာပွဲတော်နေ့များတွင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည်
နီးရာမြို့စားကြီးများ၏ ရဲတိုက်များသို့ သွားရောက်ကာ
ရော်ဗင်ဟု၊ မိတ်မာရီယန်၊ စိန့်ဂျော့နှင့် နဂါးစသော
ပုံပြင်များကို ဇာတ်ခင်းကပြ ဖျော်ဖြေ
ကြသည်။ မကြာမီ ယင်းသို့ကြပြဖျော်ဖြေမှုများသည်
အယူဝါဒနှင့် ကင်းဝေးကာ အရပ်ပြဇာတ်သဘောသို့
ပြောဆိုရာတွင်လည်း လက်တင် ဘာသာအစား
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အသောပြဇာတ်သည် ၁၅၃၃
ခုနှစ်က နစ်ကလါတ် ဥဒါးရေးသော ရပ်ရွိုက်စတာဒွိုက်စတာ
ပြဇာတ်သည် ရောမပြဇာတ်ဆရာကြီး ပလောတပ်၏
ပြဇာတ်များကို အတုခိုးထား ခြင်းဖြစ်၍၊ ၁၅၆၁ ခုနှစ်က
တောမတ်ဆက်ဗေးနှင့် တောမတ်နော်တန်တို့ ရေးသားသော
'ဂေါ်ဗိုးဒျု ' အလွမ်းပြဇာတ်သည် ရောမအလွမ်းပြဇာတ်ရေး
ဆရာကြီး ဆီနီကာ၏ အရေးအသားများကို
အတုခိုးထားခြင်းဖြစ် သည်။ သူသည် အကကျော်
ရစ်ချက်ဗားဗေ့ စသည်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ဂလုပ်ဇာတ်ရုံ
ကြီးပင် တည် ဆောက်ခဲ့၏။
အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ရေး ဆရာကြီးများမှာ ခရစ္စတိုဖာ မာလိုနှင့်
ဗင်ဂျွန်ဆင်တို့ဖြစ်သည်။ မာလို၏ ဒေါက်တာ ဖော့စတပ်၊
တမ်းဗားလိမ်းစသော ပြဇာတ်များသည် လည်းကောင်း၊
ဗင်ဂျွန်ဆင်၏ ဗောလပုန်း၊ အဂ္ဂိရတ်ဆရာ၊ ဆိတ်ဆိတ်နေသော
အမျိုးသမီးစသည့် ပြဇာတ် များသည်လည်းကောင်း
ရှိတ်စပီးယား၏ ပြဇာတ်များနှင့် အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်ထွက်
အင်္ဂလန်၌ ရှိတ်စပီးယား၊ မာလိုနှင့် ဗင်ဂျွန်ဆင်တို့၏
ပြဇာတ်များ ခေတ်စားနေချိန်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌လည်း
ပြဇာတ်များခေတ်ကောင်းလျက် ရှိသည်။ ထယ်ဝါခန့်ညား၍
အသောမပါ၊ လွန်စွာ သဘာဝကျသော အလွမ်းဇာတ်များကို
ရေးသားကြသူ ကော်နေးယီးနှင့် ရဆင်းတို့သည်လည်းကောင်း၊
အသော ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီး မော်လျဲသည်လည်းကောင်း
ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ပြင်သစ်ပြဇာတ်ရေး ဆရာကြီးများသည်
ရှေးထုံးစဉ်လာကို အင်္ဂလန် ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီးများထက်
ကာလဒေရွန်ဒေလာဗာကာ စသော စပိန်ပြဇာတ် ဆရာကြီး
များသည်လည်း ယင်းခေတ်ပေါ် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်
အဆင့်အတန်းသည် ရုတ်ခြည်းနိမ့်ဆင်းသွားခဲ့သည်။ ၁ရ
ရာစုနှစ်တွင် ထင်ရှားသော ပြဇာတ်ဆရာ
ဂျွန်ဝက်ဗစတား၏အလွမ်း ပြဇာတ်များသည် ရှိတ်စပီးယား၏
မှီသည်ဟူ၍ကား မဆိုနိုင်ပေ။ ဗိုးမွန့်၊ ဖလက်ချာ၊ မက်ဆင်ဂျာ၊
ဖို့နှင့် မစ်ဒယ်လတန်တို့၏ ပြဇာတ်များသည်လည်း
ဇာတ်ကွက်ကောင်း ဇာတ်ခန်းကောင်းများ ပါလင့်ကစား
ရှိတ်စပီးယား ပြဇာတ်များကို မမှီနိုင်ကြပေ။
၁၈ ရာစုနှစ်များတွင် အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ခေတ်
အနည်းငယ်ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာလေသည်။ ယင်းခေတ်၌
ထင်ရှားသော ပြဇာတ်ရေးဆရာများမှာ ဂိုးစမစ်နှင့် ရှရီဒန်တို့
ဖြစ်ကြသည်။ ဥရောပ ပြဇာတ် ဆရာကျော်များလည်း
ထိုခေတ်တွက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အီတလီမှ ကာလိုဂိုလဒိုးနီ၊
ပြင်သစ်မှ ဗော်လ တဲယား၊ ဂျာမဏီမှ ဂါတာတို့ဖြစ်သည်။
သဘင်မှုဂုဏ်ရသကင်းသည့် စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းသဘောသို့
၁၉ ရာစုနှစ်သည် ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်များ ပြန့်ပွားသော
ခေတ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်
များတိုးတက်ထွန်းကားသောခေတ်၊ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူး
ဆန်းသစ်သော အကြံအစည်တို့ဖြင့် လွှမ်းမိုး လျှက်ရှိသော
ခေတ်ကြီး ဖြစ်ပေသည်။ ရှိတ်စပီးယားမရှိသည့် အချိန်မှစ၍
မှေးမှိန်သွားခဲ့သော ပြဇာတ်ပညာ သည် လည်းထိုခေတ်တွင်
အသက်ဝင်ထင်ရှားလာပြန်သည်။ ခေတ်ပေါ် ပြဇာတ်ဆရာကြီး
များအနက် နော်ဝေးမှ ဟင်းနရစ်အစ်ဗဆင်နှင့် အိုင်ယာလန်မှ
ဗားနတ်ရှောတို့သည် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ အစ်ဗဆင် သည်
သူရေးသော ပြဇာတ်များတွင် ခေတ်အလျောက်
ပြောင်းလဲလာသော အတွေးအခေါ် အယူအဆများနှင့်
ဘဝအပြစ်မြင် စာပေများကိုသာ ရေးသားလေသည်။
ဗားနတ်ရှောသည် အင်္ဂလိပ် ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီးဖြစ်လျှက်
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်နေသော သဘောတရားများနှင့်
အယူအဆများကွဲပြား မှုတို့ကို စကားလုံးပြောင်ပြောင်နှင့်
ဘွင်းဘွင်းရေးတတ်သူ ဖြစ်သဖြင့် လူကြိုက်များ၏။
အထင်ရှားဆုံး ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီးတို့ ဖြစ်သည်။
ပြဇာတ်များ အဆင့်အတန်းမြင့်လာသလောက် ၁၉ ရာစုနှင့်
၂ဝ ရာစုနှစ်တို့တွင် အနောက်နိုင်ငံရှိ ဇာတ်ရုံများ၏
အသွင်အပြင်နှင့် အဆင်အယင်အခမ်းအနား များမှာ
အထူးခေတ်မှီလာလေသည်။ ပထမတွင် လေထိုး ဓာတ်မီးများကို
သုံးခဲ့ရာမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးများကို အသုံးပြုလာကြ၏။
လျှပ်စစ်ဓာတ်မီးများ ထွန်းညှိထားပုံမှာလည်း ကြည့်ရှုသူ
ပရိသတ်တို့၏ အာရုံ၌ အဝေးကြည့် အနီးကြည့်သဘောမျိုး
ထင်မြင်လာစေရန် ဇာတ်ခုံ၏ အထက်မှလည်းကောင်း၊
ဘေးမှလည်း ကောင်း ဆလိုက်မီးရောင်စုံတို့ဖြင့် အလင်းပေးကာ
အထူးပနံရစေသည်။ ဇာတ်လမ်းတွင် ပါသောအခန်းအမျိုး
အမျိုးတို့အတွက် အခမ်းအနား အပြင်အဆင်များကို ရုတ်တရက်
ပြောင်းနိုင်ရွှေ့နိုင် တင်နိုင် ချနိုင်ရန် ဆုံလည်များ၊
အချို့ဇာတ်ခုံများမှာ အသေမဟုတ် အနိမ့်အ မြင့်လိုသလို
ရနိုင်အောင် အရှင်ပြုလုပ်ထား၏။ ထိုသို့သော အစီအစဉ်များ
ကြောင့် လှပ၍ သဘာဝကျသော အခင်းအကျင်းတို့ကို
ပြဇာတ်အခမ်းအနား အဆင်အပြင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အယူအဆ ဝါဒနှစ်မျိုးကွဲပြားခဲ့ကြသည်။ ယူဆချက်တရပ်မှာ
ပြဇာတ်သည် မျက်စိအာရုံ ခုံမင်ခံစားမှုအတွက် ဖြစ်သည့်အလျောက် ဇာတ်ခုံအဆင်အပြင် အ ခမ်းအနားမှာ
အနုပညာပီပီ၊ လှလှပပရှိရမည်ဟူသော ယူဆချက်ဖြစ်သည်။
အခြားယူဆချက်မှာ ပြဇာတ်ကပြ ရာတွင်အပြင်လောက၌
တွေ့မြင်နိုင်သည်တို့ကို ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် တင်ပြနေရန်မလိုဘဲ
ယူဆချက်ဖြစ် လေသည်။ ထိုသို့ ပွဲကြည့်ပရိသတ်အား
ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်၏ အတွင်းသဘော ပေါ်လွင်စေရန်
ဖော်ပြသည့် အတတ်ကို သရုပ်ဖော်အတတ်ဟု ခေါ်ကြ၍၊
ခေတ်သစ်ပြဇာတ်များတွင် ထိုအတတ်ကို ခပ်များများပင် အသုံး
အနောက်တိုင်း ပြဇာတ်မှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာ ခြင်းမဟုတ်၊
မိမိနိုင်ငံအလေ့အထနှင့် မိမိပေါ်ပေါက်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
၁ရဝဝ ပြည့်နှစ် ကျော်လွန်သည့် အချိန်မှစ၍ အရှေ့တိုင်း
ပြဇာတ်များသည် အနောက်တိုင်းပြဇာတ်လောကကိုပင် အနည်းငယ် အငွေ့အသက် လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယပြဇာတ်များသည် ၂ ရာစုနှစ်မတိုင်မီကပင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဟန် တူသည်။ အယူဝါဒရေး
ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာ ကပွဲများမှတစ်ဆင့် နန်းတွင်းပြဇာတ်များ
ခေတ်စားလာခဲ့ရာ ၈ ရာစုနှစ်တိုင် ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော်
သကုန္တလနန်းတွင်း ပြဇာတ်ကြီးကို ရေးသားသူ ကာလီဒါသနှင့်
ရာမာယဏ နန်းတွင်းပြဇာတ် ရေးသူ ဘဝဘူတိတို့သည်
ယင်းခေတ်၏ ထင်ရှားသော ပြဇာတ်ရေး ဆရာများဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ၁၄ ရာစုနှစ်တိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးသည်
မွတ်စလင်တို့၏ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်
ခံနေရသဖြင့်၊ သက္ကတ ဘာသာနှင့် ရေးသားသော
ပြဇာတ်များသာ ကြိုကြားပေါ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉ ရာစုနှစ်
ဆာရာ ရာဘင်ဒြာနတ် တဂိုး၏ ခေတ်ကျမှ အိန္ဒိယပြဇာတ်လောကသည် ပိုမိုထင်ရှားလာသည်။
'အမှောင်ခန်းမှဘုရင်ကြီး' 'ဆောင်းကူးရာသီ စက်လှည့်ပြီ'
စသော ပြဇာတ်များမှာ သူ၏ထင်ရှားသော လက်ရာများဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌မူ စင်တင်ကြပြခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ နီးပါးခန့် ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း စာနှင့် ပေနှင့်ပြဇာတ်အရေးသား ပေါ်ခဲ့သည်မှာ အနှစ် ရဝဝ ခန့်သာ
ရှိသေးသည်။ ယွန်မင်းဆက် ( ၁၂ရ၉ - ၁၃၈၆ ) မွန်ဂိုဘုရင်
ကူဗလိုင်ခန် လက်ထက်တွင် တရုတ်စာပေ ပညာရှင်ကြီးများ
သည် ပြဇာတ်လောကကို ဦးလှည့်လာကြသဖြင့် စာပေလောကတွင် ပြဇာတ်အရေးအသား ပေါ်ပေါက်လာသည်။
' တောင်အီ၏ဒုက္ခ ' ' အိမ်စေမကလေး၏ စက်ပုန်းခုတ်မှု '
' အနောက်နန်းမှ အချစ်စခန်း ' စသော ပြဇာတ်များမှာ
ယင်းခေတ်မှ ပြဇာတ်များဖြစ်၍ အနောက်နိုင်ငံများမှပင် ဘာသာပြန်
ကပြကြသည်။ မင်မင်းဆက်ခေတ်တွင် ရေးသားသော ပြဇာတ်ပေါင်းများစွာအနက် ပြဇာတ် ၆ဝဝ ခန့်
ယခုတိုင် ထင်ရှားရှိသည်။ ယင်းတို့တွင် 'ပြွေပုံပြင်' ပြဇာတ်သည် အနောက်တိုင်း ပြဇာတ်လောကတိုင် ကျော်ကြားသည်။
တရုတ်ပြဇာတ်များကို အနောက်တိုင်း ပြဇာတ်များကဲ့သို့
အသောပြဇာတ်နှင့် အလွမ်း ပြဇာတ်ဟူ၍ မခွဲဘဲ၊
စစ်သည်တော်ဘဝ ပြဇာတ်နှင့် အရပ်သားဘဝ
ပြဇာတ်တို့အဖြစ်သာ ခွဲထားသည်။ တရုတ်ပြဇာတ် များသည်
အိန္ဒိယပြဇာတ်များကဲ့သို့ လူထုနှင့် ကင်းဝေး၍ မင်းစိုးရာဇာ
အတွက်သာ ဖြစ်နေမှုကြောင့် လူထု သည်ပညာရှင်ကြီးများ၏
အနုပညာ လက်ရာကို ခံစားခွင့် မရကြချေ။